३८० मिनेटको खेल पश्चात रोनाल्डोको २ गोल !! रोनाल्डोको यी २ गोल पछाडीको लुकेको कथा यस्ता छन् !! जान्नुहोस - Experience Best News from Nepal
३८० मिनेटको खेल पश्चात रोनाल्डोको २ गोल !! रोनाल्डोको यी २ गोल पछाडीको लुकेको कथा यस्ता छन् !! जान्नुहोस
सिरी-ए पोर्चुगि खेलाडी लामो समय देखि आफ्नो पछिल्लो समय निकै कसरत सिर्फ गोलको खाता खोल्नकै निम्ति गरि रहेको बेला आज भएको सासुलो बिरुद्धको खेलमा आफ्नो पहिलो र संगै दोस्रो गोल गर्न सफल बने।
३ खेली सक्दा पनि युबेनटसका नब खेलाडी जो रियल मद्रिडबाट हालै आफ्नो खेल इटालीबाट प्रारम्भ गरे उनको निम्ति गोल गर्नु फलामको चिउरा बनेको थियो। खेलमा २३ बल सट या प्रहारमा समेत कुनै गोल अग्रिम खेलहरुमा गर्न सकेका थिएनन्। लामो समय देखि गोलकै खोजीमा रहेका रोनाल्डोले अन्तत खाता खोले।
३२० औ मिनेटको अथक खेल अनि खेल प्रायस मार्फत यी पोर्चुगि स्टारलाई धारिलो खेल पूर्णता र समर्थकका निम्ति बहार ल्यायो। निराशाजनक खेल अनि खेलमा गोलको सुन्यता हुदा स्पेनिस ला लिगाका महा अग्रज रोनाल्डोका निम्ति हर खेल लज्जास्पद बनेको थियो जसको भार आजको दुइ गोलले थेगेको छ।
निकै नै उच्च दबाब खेल अनि निकै देफेन्सिब मानिने इटालियन खेलमा आज सासुलोले खेलमा निकै पहिलो ४५ मिनेट दबाबमा राख्यो र अन्तत ६५ औ मिनेटमा सासुलो चुक्यो। रोनाल्डोको गोल गोल उत्सबले पहिलो गोलले जुबेका समर्थन र रोनाल्डोको समर्थनमा निकै ठुलो आसा र राहतको रौनकता पलायो।
रोनाल्डोलाई सिरी-एमा प्रवेश भएको पहिलो3खेलमा बल पास र सम्भावना निकै कम बनेको थियो तर आजको खेलमा निकै सम्भावना बढ्यो र जुवेका स्टार रोनाल्डोले २ बल जालीको स्पर्स दिलाए।
रोनाल्डोको दोस्रो गोल संगै रोनाल्डोका निम्ति लिग खेलमा आफ्नो गोल अंकलाइ ४०० पुर्याएका छन। रोनाल्डोले २८ बल सट पश्चात ४ खेलमा पहिलो र दोस्रो गोल गरे। रोनाल्डोको यो ५१७ गोल हो।
खेलमा निकै दबदबा थियो धेरै रोमान्चक पनि र इन्जुरी टाइममा खोमा बाबाकरले सासलोका लागि सान्त्वना गोल गरे । खेल सकिन एक मिनेट बाँकी छँदा डुल्गास कोस्टाले रातो कार्ड पाए र युभेन्टसले १० खेलाडीका साथ खेल अन्त्य गर्‍यो ।